Dowladda oo faahfaahisay diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde | SMC
Home WARARKA MAANTA Dowladda oo faahfaahisay diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde
Dowladda oo faahfaahisay diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde
Diyaarad nuuca xamuulka qaada oo ay leedahay shirkadda Sky ward ee dalka Kenya ayaa ku burburtay dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka Aadan Cadde sidda uu sheegay Sii hayaha Wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar.
Diyaaradda ayaa magaalada Baladweyne u qaaday xamuul, balse waxay dib ugu laabatay Muqdisho, markii cilladi soo wajahday, waxaana saarnaa 4-qof oo duuliyeyaasha iyo shaqaale isugu jira, waxaana dhaawac uu soo gaaray qaar ka mid ah Shaqaallaha diyaaraddaha.
Saddex ka mid ah ayaa lagu guuleystay in laga soo saaro sidda uu sheegay Wasiir Oomaar.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dadkii diyaaradda laga soo saaray loo qaaday Isbitaal, maadaama qaarkood ay qabaan dhaawacyo.
Diyaaraddaan ayaa goobta ay kusoo dhacday horay loogu baneeyay, maadaama ay soo sheegtay in cilad ay soo wajahday.
Previous articleMaxaad ka Ogtahay halka Qorshe ay isku qanciyeen madaxda DF iyo kuwa dowlad goboleedyada?
Next articleGuddiga xilka wareejinta ra’iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay